२० बर्षपछि घर जग्गा गायब हुँदा चिन्तित
बुटवल १२ चैत । जग्गा किनेर घर बनाएको झण्डै २ दशक पछि घरजग्गा हराएकोमा साबिक मक्रहर ३ एवं हाल तिलोत्तमा नपा १३ का जगत बहादुर आले चिन्तित बनेका छन । बिसं २०५२ सालमा रजिष्टे«शन...
मोरङमा एमाले प्रबेशको लहर चल्दै
उर्लाबारी(मोरङ), १२ चैत । मोरङको हसन्दहमा एमाओवादी निकट शिक्षक संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष तिलविक्रम बस्नेत सहित एक दर्जन एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका छन् । हसन्दहमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच एकिकृत माओवादीका...
२५६० औं बुद्धजयन्ती: राष्ट्रसंघका महासचिव मुन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी लुम्बिनी आउने !
– नरेश केसी लुम्बिनी, १२ चैत । २५६० औं अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धजयन्ती समारोहमा सहभागी हुन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पींग लुम्बिनी आउने भएका छन् । २५६० औं बुद्धजयन्ती...
नेपाली सेनाबारे अमेरिकाले लुकाएको ठूलो रहस्य खुल्यो, ऋषि धमलाको हात
काठमाडौ, १२ चैत । विश्वभरीका महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजकि गर्ने बेवसाईट विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो दस्तावेजमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको समेत चर्चा गरिएको छ । धमलाले अक्टोबर ७, २००९ मा अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेको...
– नरेन्द्रसिह कार्की दार्चुला, १२ चैत । जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा रगत अभावका कारण शल्यक्रिया सेवा प्रदान गर्न समस्या भएको छ । आवश्यक मात्रामा रगत नहुँदा गत भदौदेखि सञ्चालनमा आएको निःशुल्क प्रसुति सेवा केन्द्रमा समेत...
एभरेष्टमा बालक मृत्यु प्रकरणः यो आत्महत्या होईन् “हत्या” नै हो
– विकाश पराजुली बुटवल, १२ चैत । बुटवल १० सुख्खानगरमा रहेको एभरेष्ट उच्च माविमा फागुन १३ गते घटेको घटना अझै साम्य भएको छैन् । फागुन १३ गते विद्यार्थी अनिल चौधरीले विद्यालय भित्र छात्रावासमै “आत्महत्या”...
चीनसँगको सम्झौता ठूलो उपलब्धि, दक्षिण छिमेकमा खैलाबैलाः उपप्रम केसी
– विकाश पराजुली बुटवल, १२ चैत । उपप्रधान तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले चीनसँग भएको पारवहना सम्झौताका कारण छिमेकीमा खैलाबैला भएको बताएका छन् । उनले चीनसँग भएको सम्झौता नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको समेत...
चीनले संविधानको स्वागत गरेपछि मधेसी मोर्चामा खैलाबैला, महतो बेइजिङ जाने !
काठमाडौं, १२ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चिनियां सरकारद्वारा नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेकोप्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले कडा आपत्ति जनाएको छ । मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले चिनियाँ सरकारद्वारा मधेशी जनजाति जनतामाथि...
आन्दोलन गर्न उस्काउने भारतीय राजदूतलाई एमाले नेताको कडा जवाफः होस गर
काठमाडौं, १२ चैत । नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले मधेसवादी दलका नेता बोलाएर ‘आन्दोलन गर्न उस्काउने’ भारतीय राजदूत रञ्जीत रेलाई कडा जवाफ दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै जवाफ दिँदै नेता पोखरेलले छिमेकमा आगो...
हाम्रो काठमाडौंमाः श्रीमती लुकाएर पहिला अर्कैसँग अनैतिक सम्बन्ध, पछि…
काठमाडौं, १२ चैत । ‘पूर्व प्रेमिका’को अश्लील तस्वीर सार्वजनिक गरेको अभियोगमा एक युवकलाई हेटौंडाबाट पक्राउ गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धम्की दिई चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ कमाने बस्ने निरजबाबा उपनामले चिनिने...
– भोबिन्द्र शाह बाजुरा, १३ चैत । बाजुरामा जिपको ठक्करबाट एक जना बालकको मृत्यु भएको छ । जिपले किच्दा जगन्नाथ गाविस वडा नं ६ बस्ने मन दमाइका ५ बर्षीया छोरा आदेश नेपालीको ज्यान गएको...
चीन असल मित्र हो: उपेन्द्र यादव
काठमाडौँ, १२ चैत । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीको छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमण अपेक्षा गरिएअनुसार उपलब्धिमूलक हुन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले चीनले नेपाललाई...
« 1 … 5,830 5,831 5,832 5,833 5,834 … 7,734 »